Health literature, stories and issues
यी शब्दमा उत्रिएका जीवन अनुभव हुन् ।
सधैं स्वस्थ पनि रहन नसकिने रहेछ । स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठूलो धन हो भन्ने कुरा आफैं वा आफ्नो नजिकको बिरामी नहुँदा सम्म पत्तो पाइन्न । एक पटक अस्पताल पुग्नपर्छ । धेरै कुराको दर्शन पाइन्छ । सम्पुर्ण जीवन दर्शनको दर्शन हुन्छ । लगभग सबै जाँच हुने विस्वासले बिरामी हुँदा नजिकैको मेडिकल कलेजमा जान रुचाइन्छ । केही महिना अगाडिको कुरा हो, मेडिकल कलेजमा आफन्ती बिरामीको चेकजाँचको लागि ब्ल्ड टेस्ट आदिको दौड्धुपमा थिएँ ।
साँझको समय थियो । घाम डुबिसकेको थियो । म लाइनमा व्याकुल हुँदै उभिइरहेको थिएँ । त्यहीँ लाइनमा मेरो अगाडि एक जना अन्दाजी १५ वर्षीय केटी पनि लाइनमा थिइन् । अलि पुरानो लुगा , खुट्टामा हिलो र फाट्नै लागेको चप्पल लगाएकी थिइन् । उनी टाउको एकातिर बङाउदै कान च्यापिरहेकी थिइन्। सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो कि उनको कान बेस्सरी दुखेको हुनुपर्छ । उनको साथमा एक जना अन्दाजी ३०-३२ वर्षकी महिला पनि थिइन् । वातावरण पुर्ण नियाल्न नपाउँदै बिल काउन्टरबाट पैसाको माग आउँछ ।
एमर्जेन्सी टिकेटको मूल्य सुनेर होला । त्यो नानी केही झस्किन्छिन् , केही हच्किन्छिन् । उनको हातबाट खुम्चिएको रु ५०० को नोटले नभ्याउने जस्तो लागेपछि उनी लाइन छोडेर निस्किन्छिन् । उनीसँग साथमा रहेकी महिलाले भन्छिन् " लौ न । कति अचाक्ली महङो रहेछ । "
म आफ्नो ब्लड टेस्ट आदिको पैसा तिर्छु । मलाई पनि त्यो पहिलेपहिलेको शुल्क भन्दा धेरै महङो लाग्छ । बाध्यता थियो । बिरामीको उपचार गर्नै पर्यो । पछि विचार गर्दा मलाई लाग्छ, मेडिकल कलेजले त्यो अत्याचारी शुल्क लिनु नहुने हो । किनभने मेडिकल कलेजको भुइँ मान्छेहरुप्रति अझै बढी जिम्मेवारी हुन्छ । तिनै बिरामीहरुका रोगहरु अध्ययन गरेर धेरै स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक उत्पादन हुन्छन् । ती सम्पुर्ण बिरामीहरुप्रती उत्तरदायी हुनैपर्छ । कसैले प्रारम्भिक प्रवेश शुल्क नै तिर्न नसकेर स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित हुनु दुर्भाग्य हो । यदि सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ भने त्यस्तो देखिएका अराजक शुल्कप्रति सरकारको ध्यान जानु अपरिहार्य हो ।
अहिले चिकित्सा शिक्षाको निश्चित शुल्क निर्धारण गरेपस्चात मेडिकल कलेजहरुमा पैसाको बलमा मात्रै डाक्टर पढाइ हुनमा रोक लागेको छ । जसको बढी पैसाको लगानी , उसले डाक्टर पढ्न पाउने कुसंस्कार त हटिसकेको छ । त्यसको सोधभर्ना कतै आम जनताबाट बेडचार्ज देखि ल्याब चार्जको शुल्कबाट गर्न खोजिएको त हैन ? र यो कोभिडको समयमा ती मुल्यमा कुनै अंकुश लगाउन नसकेको अनुभव सबैलाई भएकै हो । किनभने कोभिडको महामारी थेग्न नसकेर सरकार आफै निरीह हुन पुगेको थियो । सो महामारीमा निजि अस्पतालले राम्रो सेवा दिएका हुन् । तर शुल्कलाई मनपरी गरिएको आभास हुनाले यस विषयलाई सायद अब निर्वाचित हुने एन एम सिका उम्मेदवारहरुले गम्भीरताका साथ लिनेछन् भन्ने आश छ । एन एम सिले मेडिकल कलेज निरिक्षण गर्ने बेला "धन भनेपछि महादेवका त्रिनेत्र" भन्ने आरोपलाई असत्य सावित गर्नेछ भन्नेमा विस्वास छ ।
त्यो नानीको घटना सानो घटना हो । सबैले भोगेको घटना हुनुपर्छ । तर त्यसले सम्पुर्ण राष्ट्रको स्वास्थ्य सेवाको प्रवाहको कमजोरी उदाङ्ग पार्छ । त्यसैले होला, देशको हरेक भुगोलमा उपयुक्त हुने गरी एउटा मेडिकल कलेज सरकारी नै हुनुपर्छ भनेर भन्ने गरेको कुराले मलाई बिज्यो ।
नाफामुलक संस्थाहरुले भुइमान्छेलाई सेवा प्रवाह गर्न असमर्थ रहन्छन् । सबैभन्दा महङो अस्पताल भनेर सोच्दा धेरैको दिमागमा ग्र्यान्डी वा मेडि सिटिको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ होला। त्यो सेवा महङो नलाग्ने व्यक्तिहरु पनि छन् । उनीहरुको लागि त्यो सेवा राम्रो र ठिक छ । तर घरखेत नै बेच्नुपर्ने गरी आर्थिक भार पर्ने त्यो स्वास्थ्य सेवा आम मनुष्यलाई कल्पना मात्रै हुन्छ । त्यसैले त सरकारी अस्पताल सुदृढ हुनुपर्छ । सक्षम हुनुपर्छ । बिरामीको उपचार राम्रो र गुणस्तरिय हुनुपर्छ । बिरामी कुर्ने सोफा चिल्ला नभए पनि फरक नपर्ला । सामान्य कुर्सि र टुल पर्याप्त होला । करिडरमा ए सिको व्यवस्था गर्न नसकेपनि उपचार उल्टो त पर्दैन ।
कहिले हो ,एक पटक सुन्नमा आएको थियो ," मेडिकल कलेजहरुले १० प्रतिशत बेडहरु गरीब बिरामीका लागी निशुल्क गर्नुपर्छ । " के त्यो सत्पात्र विरामीका लागि कार्यन्वयन भइरहेको छ त ? वा त्यो खुसीको खबर क्षणिक देखाउनकै लागि मात्रै हल्ला थियो त ! अहिलेसम्म कम्तीमा १० प्रतिशत एम बि बि एस् सिट छात्रवृत्ति दिन बाध्य भएका मेडिकल कलेजलाई १० प्रतिशत बेड निशुल्क बेड गराउन मिल्ने भए !!
हरेक वडामा अस्पतालको कल्पना गर्नुभन्दा भूगोलको हिसाबले भएका अस्पताललाई व्यवहारिक स्तरोन्नति गर्ने र नभएको स्थानमा नयाँ एउटै अस्पताल बनाउनु निकै फलदायी हुनेछ । स्थानीय स्थानियविचको जुँघा लडाइले केवल व्यय मात्रै हुन्छ । भुगोल र जनसंख्याका आधारमा स्वास्थ्य संस्था निर्माण तथा स्तरोन्नति हुनुपर्छ। न कि कसैको राजनैतिक एजेन्डा परिपुर्तिका लागि......।
यी सब कुराहरु मनमा ओइरिँदै थिए । बाहिर अस्पताल प्राङ्गणको वायव्य कुनामा ती नानी पिडाले गर्दा कानलाई छोपेर बसेकी रहेछिन्। त्यो दृश्यले गर्दा म नसोधी बस्न सकिन । उनको कान धेरै दिनदेखि दुखेको रहेछ । सहनै नसक्ने भएपछि अस्पताल आउने आँट गरेकी रहेछिन्। आमा छोरी दुवैले ज्याला मजदुरी गर्नुपर्ने वाध्यताले उनले सानोमा पढ्न पनि छोडेकी रहेछिन्। सुन्दा अचम्म लागेपनि अस्पताल आउन पनि ठूलो आँट चाहिन्छ कतै कतै । हैन त ?
आफै बिरामी लिएर उपचार गराउन गएको मभित्रको डाक्टरी नचाहेपनि जाग्न थाल्यो । उनीसँग आएको साथीलाई केही सुपथ मुल्यका औषधि कागजमा लेखेर किन्न पठाएँ। दुखाइ कम गर्ने औषधि तुरुन्तै खान दिएँ ।
दुखाइ केही कम भएपछि मैले उनलाई सोधेँ "स्वास्थ्य बिमा भनेको थाहा छ । " उनलाई त्यसको बारेमा केही ज्ञान रहेनछ । स्वास्थ्य विमा गरेको भए अस्पताल प्रवेश गर्न नपाइ बाहिर बस्नुपर्थेन । उपचार पनि सहज हुने थियो । स्वास्थ्यको पहुँच पक्कै पनि बढाउने गर्छ बिमाले । कुरो हो कसको पहुँच ! भनिन्छ नि केही कुरा उपयोग गर्न पनि अक्कल हुनुपर्छ । टाठाबाठाले बिमाको जवरजस्ती उपयोग गर्न " व्होल बडि चेक अप" आदि गर्न लगाएर वा बिरामी भएको नक्कल गरेर अक्कल लगाउँछन्। एक किसिमले भन्नुपर्दा बिमा गर्दा केही पैसा तिरेकोले जवरजस्ती दुई गुणा उठाउनैपर्छ भन्ने मानसिकता छ । कतै भने ती नानीजस्तै बिमा भनेको नै थाह नहुने पनि छन् । विमाको सम्पुर्ण फाइदा र उपयोगिता उनीहरुलाई बुझाएँ र विमा गराउन राजी गराएँ । छिटोभन्दा छिटो सम्पुर्ण जनतामा स्वास्थ्य विमाको पहुँच सुनिश्चित होस् ।
केही समयमा औषधिले राम्रै काम गरेछ । त्यसैले उनीहरु घर फर्किन्छन् । उनीहरु फर्किँदै गर्दा एउटा सामान्य स्वास्थ्यको अधिकारबाट वन्चित गरेको दृश्य मेडिकल कलेजका भित्ता र बोर्डले देखेर निकै खिन्न हुन्छन् ।
विवाह संस्मरण- काउकुतीदेखि विवाहसम्म ।
- January 09, 2022
त्यो एक खिल्ली चुरोट किनेको दिन ।
त्यो एक खिल्ली चुरोट किनेको दिन । सल्लाको माथिल्लो जङलबाट सल्लिपिर पन्छाउँदै कम्मरमा आधा पेट ढाक्ने पटुका बाँधेकी एउटी आमा झर्दै छिन् । हातमा लौरो छ । बाटो पहिल्याउने र टेक्ने लौरो । बुढेस्कालको एउटै साहारा भनम् । थाप्लोमा नाम्लोले थिचेको छ । र पिठ्युमा डोकोभरी दाउरा बोकेकी छन् । सुस्त सुस्त हिँड्दै अस्पताल प्राङण हुँदै आउँछिन् । उनी हल्का स्याँ स्याँ गर्दै छिन् । अरुका निम्ती त अझै तगडा नै देखिन्छिन् । उनको उमेर ढल्किँदै गयो । अनुहार चाउरिँदै गयो । उमेर गन्तिले कति पुग्यो, पत्तो छैन। कति माघका चिसा सिरेटाले हाने होलान् उनलाई । हरेक चुनावमा भोट पनि खस्यो उनको कतिपटक । नातीहरु अमेरिका पुगे । छोराहरु राजधानी पुगे । तर उनको भारी कत्ति कम भएन । छुटेन त्यो दाउराको भारी कहिल्यै । सल्लिपिरले उनको बाटो सधैं ढाकिदिन्छ । उनी सधैंजस्तो सल्लिपिर हटाउँदै बाटो आँफै बनाउँदै जङलबाट निस्किन्छिन् अस्पताल नजिकै । उनको घर पुग्ने छोटो बाटो परेर मात्रै भने हैन । हिंडेर बनेको बाटो ,तर नक्सामा नरहेको बाटो हो त्यो । सधैं जीवननक्सामा स्पस्ट बाटो नहुन सक्छ । आ
फोक्सुन्डो यात्रा : अविस्मरणीय यात्रा ।
फोक्सुन्डो यात्रा : गर्नैपर्ने यात्रा । ( विशुद्ध यात्रा संस्मरण मात्रै!! नियमित ट्रेकरको लागि पढ्न मनाही छ) फोक्सुन्डो यात्राको सकसक जीवन एकनासको भयो भने निरस हुन्छ । त्यसैले एकाएक यात्रामा जाने झोक चल्छ । नेपाल सरकारका कर्मचारी भेट्दा भेट्दै दिक्दार बनेकोले घुमेर केही समयलाई सबै कुरा बिर्सिने रहर हुन्छ । त्यसैले अति दुर्गम मानिने डोल्पामा स्थित शे फोक्सुन्डो ताल भ्रमण गर्ने इच्छा पलाउँछ । त्यसको केही आधार भनेको डोल्पा दुनैस्थित जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत भाइहरु । उनीहरुसँग फोन सम्पर्क गर्छु । पहाडको काखमा बसेको एक महिना नबित्दै उनीहरुका खुट्टा चिलाउन थालिसकेका रहेछन् । संयोगले भन्नुपर्छ मलाई फोक्सुन्डो यात्रा गर्ने रहर व्यक्त गरेको केही दिन अगाडि नै उनीहरुले प्लान बनाइसकेका रहेछन् । म त्यस प्लानमा थपिँदा कुनै भार हुने देखिन । आकर्षण र रिसब टिचिङमा पढ्ने क्रममा चिनेका मिजासिला भाइहरु । अनुहारले चिनेको तर धेरै संगत नपरेकोले मैले नाम बिर्सिसकेका जिल्ला अस्पताल प्रमुख डा प्रसन्न भने तीन पटक फोक्सुन्डो पुगिसकेको सुनेर तीन छक परेको थिएँ । नेपालगन्जसम्मको टिकेट लिएर नेपाल्गन्ज बस
Write to be free......
History is the basic of basis of diagnosis
हात धुनु- महान खोज ।
Why do we miss the diagnosis ?
एसिडको बोत्तल ।
Why every crying is not just whining ?